MTN South Africa launches 5G trial with Huawei - Makamba Online
Home » Technology » MTN South Africa launches 5G trial with Huawei
MTN South Africa, together with Huawei have launched their C-band 5G trial on Tuesday, 12 November 2019, as part of the operator’s network evolution plan towards 5G.
“MTN is very pleased to launch the 5G C-band trial in South Africa,” says MTN CTIO, Giovanni Chiarelli.
“This trial demonstrates the capability of this new technology while giving customers a glimpse of what the future holds, showcasing the next generation of applications for consumer and enterprise customers. MTN will further co-operate with Huawei to accelerate commercial 5G deployment.”
MTN South Africa launches 5G trial with Huawei Reviewed by Gesture on Nov 13 . MTN South Africa, together with Huawei have launched their C-band 5G trial on Tuesday, 12 November 2019, as part of the operator’s network evolution plan toward MTN South Africa, together with Huawei have launched their C-band 5G trial on Tuesday, 12 November 2019, as part of the operator’s network evolution plan toward Rating: 0
Black Coffee speaks on Enhle Mbali...Five candidates running for Algeria...
Rwanda tests VW’s electric cars as eGolf model hits Kigali streets